Aqulunqwa njani amaqela amajelo eendaba | Martech Zone
Ahlelwe njani amaqela amajelo eendaba ezentlalo
NgeCawa, nge-27 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Le infographic evela kwi-Go-Gulf.com yenza umsebenzi omkhulu ekuboniseni umahluko omkhulu kwindlela amaqela eendaba ezentlalo asebenza ngayo.
Funda ukuba zingakanani iinzame ezenziwa ngamashishini kwimikhankaso yawo yemithombo yeendaba. Bangaphi abantu ababaqeshileyo kumaphulo abo eendaba ezentlalo, zeziphi iimpawu abajongi abazijongayo kwiingcali zosasazo lwentlalo ngokweenkcukacha zethu ezimalunga nolwakhiwo lwemibutho yabo kumaqela eendaba ezentlalo. Ukusuka kwi-Go-Gulf infographic, Alwakha njani amaQela amaThsaba eeNtlalo.
Yimba kancinci kule infographic kwaye uza kubona isibini esibonisa isibalo… njengenyaniso yokuba i-13% yeenkampani azonwabanga ngezixhobo ezikhoyo. Okanye ukuba iinkampani ezingama-45% zisebenzisa amajelo eendaba ezentlalo ukuvelisa isikhokelo, kodwa yi-13% kuphela evavanya ukuguqulwa! Siseneendlela zokuya kweli shishini!
tags: Imidiya yokuncokolaamaqela eendaba ezentlaloubume beqela
I-Mandrill: Iqonga le-imeyile lesicelo sakho
Imithombo yeendaba yosetyenziso: Umyili osisiSetyenziso seNgcono